SAWIRRO: Farmaajo oo qaatay shahaadada Musharraxnimo ee Madaxweynaha DFS – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
SAWIRRO: Farmaajo oo qaatay shahaadada Musharraxnimo ee Madaxweynaha DFS
May 9, 2022 Xuseen 9
Madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhamaaday ee DFS, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo is Diiwaangeliyay ayaa qaatay shahaadada Musharraxnimo ee xilka Madaxwaynaha Soomaaliya.
Farmaajo ayaa kamid ah xubnah loo saadaalinayo inay si weyn ugu loolamaan doorashada Madaxweynaha 10-aad ee JFS, oo loo madlan yahay 15-May inay ka dhacdo Teendhada Afisiyoone.
Farmaajo soo kii yiri xukunka markii uu qabtey ma isa soo sharaxayo mar danbe,
Marka waxaa ku cadaatey Been in uu sheegay, balankii oo uu ka baxay,
Iyo khiyaamo qaran.
Xildhibaano laaluush qaadanaya,
Madax wada khaaimiin ah,
Allah baan ka magan galney Akhlaaqda noocaas oo kale ah.
MD Farmaajo Waa Macalin dhiga casharo culus oo siyaasaded. Raga ay siyaasada isku hayaan waxa ugu wayn oo uu kaga sareeyo waxay tahay ;
Farmaajo rabitaankiisa shaqsiga ah kaliya waxka kuma dhiso, Marwalba waxa rabitaankiisa ka socda qodobo dastuuri ah ama wax dalka oo dhan dan u ah; Halka raga kale ee siyaasada ka shaqaysta waxa kaliya ay arkaan ay tahay dantooda shaqsiga ah!!
Hada ololaha Madaxwaynaha markaan si dhow u fiiriso waxa rabitaankiisa la socda boqolal qorshe oo danta guud ah, una baahan in tixgalin wayn la siiyo, Halka raga kale aysan ku jirin qof sidaas isku waafajin kara danta guud & midiisa shaqsi ah
Allow kuwii waxka barta naga dhig
SHAHAADADU MACNAHEED, MAR HADDII AANAY NIDAAM RASMI AH SALKA KUHAYN?
Dal iyo dadkiisaba ma hanan karaan qarannimo iyo dawladnimo dhab ah oo taam ah ilaa markahore lahelo oo lahaleelo dareen waddaniyadeed oo dadkasta laab iyo maan ahaanba isku gunnudaya ee uu iskusi uguwada hoggaansanyahay.
Aadmiga dhammaantiina, dareenka waddaniyadeed wuxuu aalaaba kusaleysnaadaa ama caqiido ama caado dad wadaago oo uwada muqaddas ah. Caqiidadiisa mise caadadiisa ayuu dadkasta heer goshiyeed uga curistaa murtimeer u noqda aydiyoloojiyad rasmi ah, taasoo usahasha in dadkaasu kasii unkado nidaam ismaamuleed oo taam ah iyo gardhihii lagu tiirin lahaa.
Haddaba, mar haddii aanay Soomaalida kadhexeynin dareen waddaniyadeed iyo aydiyoloojiyad maan iyo laab ahaanba qummaati iskugu guntaysa, waxaa mustaxiil noqonaya inay qarannimo iyo dawladnimo dhab ah oo taam ah saldhigato oo kuxasisho. Sidaas aawadeedna, waxan Xamar laga dhoodhoobayo waa iska khayaal aan abid dhaboobi doonin oo waxna lagadheefi doonin.
Intii khayaalkan lagusii ragaadi oo rafaadi lahaa, waxaa Soomaalida udhaanta in intii hadba is’oggol ay geyigeeda ku dawladeysato oo iskeedana isu hormariso muddo ilaa 30 sanadood oo dambe ah, kaddibna laga wadaxaajoodo in qarannimo guud loo bislaaday iyo inkale.
Dadka marka rabi halaagaayo
Madaxada way caayaan maxduna
Dadka way dhacaan laakiin
Farmaajo kumahayno qiyaano cad
Laakiin dadka wali cun
35sano ninka Fondo kunoolaa
Waqti ayuu ubaahanyahay
Inuu dowlad waxa aay tahay
ali dhigane says:
Ninka walaalkii Qaadkii Itoobiya u xidhay, ninka carruurtii Ereteria la geeyey ka jawaabi waayey, ninka dilkii Ikraan Tahliil ka hadli kari waayey. oo hooyadeed qaabili kari waayey (guilty are afraid ), ninka Qalbi-dhagax amxaaro u dhiibay, ninka 100 jeer been sheegay oo yidhi anigu soo noqon maayo, 4 sano qudha i siiya nabadoon baan noqonaya, ee Puntland iyo Jubbaland tegi kari waayey, ee xidhiidhkii u jaray, haddii la soo celiyo xaggee xukumaya, jug jug meeshad joog miyaanay ahayn, dalka badh Alshabaab baa haysata Woqooyi waa go’ay, Puntland Farmajao ma aadi karo, Jubbaland ma aadi karo laga reebo Garbahaaray oo aanan hubin, adeer halkee xukumaya dee Villada ayaan iska fadhiyahayaa
@@Awlal intaa aad sheektay waxaa sii dheer qabkii iyo dareenkii dadnimo ahaansho oo baaba’day,
Oo qofkii soomaaliga ahaa ku wareersanyahay yuu u dhashay,ka dhashay,u dhalayaa.
Nidaamkan aadka faalootay waa sidaa aad u qeexday.
Guuleyso mudane Madaxweyne…last hope of good governance in Somalia rests on your shoulders. If you’re not elected, is going to be business as usual. The unpatriotic thieves will flogg like birds to neighboring countries, Kenya, Ethiopia, Arab countries
5 sanno ka hor Farmaajo Bidaar ayuu lahaa Maantane ma laha sidee wax u jiraan?